Kedu ihe bụ akụ maka azụmazụ azụlink?
Ka anyị malite site na nkọwa nke njikọ ụlọ njikọ. Ọ bụrụ na Google maka okwu a, ị ga-enweta ndepụta nke usoro nke nwere ike inyere gị aka inwe njikọ, ma ọ bụghị eduga gị na atụmatụ ụlọ ọrụ njikọ.
N'ikwu okwu n'ozuzu, atụmatụ ndị a na-akọwa echiche nke ịmepụta ihe dị oké ọnụ ahịa iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ jikọọ na nke gị. Echiche ọzọ nke nwekwara ike inye aka na njikọ njikọ gụnyere - iwu mmekọrịta na mmekọrịta mmekọrịta na netwọk; gbaa ndị ahịa ume ka ha jikọọ; isi ihe dị n'ime obodo gị; tinye aka na ntanetị na nke obodo.
Ihe ndị a nile dị irè na ihe bara uru maka usoro ịzụ azụ azụlink. Otú ọ dị, ha na-egosi anyị naanị ihe mere ndị ọzọ nwere ike iji jikọọ na ngalaba gị. Ha anaghị azịza zuru ezu maka ajụjụ gị, na-enye nanị ọkara nke atụmatụ.
Nhazi ụlọ njikọ bụ usoro nke ịme ihe mgbaru ọsọ site na ebe nrụọrụ weebụ dị. Usoro njikọ ụlọ na-ele anya dịka ụbụrụ n'ihi na mgbaru ọsọ ikpeazụ gị na-adabere na mmegbu. Otú ọ dị, ọ gaghị ekwe omume inweta ihe na-enweghị usoro ziri ezi. Ma ọ bụghị ya, njikọ ndị i chebere nwere ike ma ọ bụ ghara ịbụ ezigbo ihe mgbaru ọsọ gị.
Akụkụ a na-etinye aka na usoro ziri ezi nke SEO njikọ. Ka anyị malite na ihe mgbaru ọsọ gị na ụlọ ọrụ isi njikọ kwesịrị ịdị ka.
Ihe mere saịtị gị ji achọ usoro ntọala redlink
Mepụta njikọ dị n'etiti ebe nrụọrụ weebụ dị mma
O doro anya na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla n'agbanyeghị na ntụziaka na nha ya chọrọ backlinks. E nwere otu akụkụ dị mkpa nke usoro Ịntanetị. Otú ọ dị, gịnị mere anyị ji chọọ njikọ ndị ọzọ?
E nwere ihe abụọ bụ isi mere ị ji achọ backlinks:
Iji soro ndị obodo, weebụsaịtị, na nyiwe na ụlọ ọrụ gị na-emetụta;
Ịkwado maka okwu ọchụchọ dị elu ma dị elu.
Google nyochaa weebụsaịtị site na PageRank algorithm. Nke a Google algorithm na-eji backlinks sitere na ebe ndị ọzọ a kwadoro iji chọpụta njirimara, ikike, na mkpa. Nke a algorithm na-emetụta ọnọdụ ebe nrụọrụ weebụ ozugbo na ibe nsonaazụ ọchụchọ ma bulite aha aha weebụ na anya Google.
Get traffic targeted
Ụzọ doro anya dị mkpa maka ndị chọrọ ịbanye na njikọ ụlọ. Ikwesiri iduzi ihe mgbaru ọsọ karia nke backlink. Ma ọ bụghị ya, mkpọsa niile a na mgbalị ị tinyere na ya agaghị aba uru. Ya mere, jụọ gị ajụjụ banyere nzube dị gị mkpa njikọ? Azịza kachasị ọnụ na azịza nke ajụjụ a bụ ịnweta okporo ụzọ. Okporo ụzọ pụtara na ndị ahịa ndị ọzọ nwere ike ịpị na saịtị gị ma eleghị anya, ghọọ ndị ahịa. Ịkọwa ihe mgbaru ọsọ gị kwesịrị ịmalite site n'ịchọpụta ohere. Ikwesiri ichoputa ohere di iche iche di n'iche gi na otu esi erite uru na ha.
Nyochaa ọrụ ịntanetị gị ugbu a, ebe nrụọrụ weebụ nke dị gị, ma mepụta atụmatụ iji melite ya. Site n'ime nke ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịzụlite usoro njikọ ụlọ njikọ gị Source .